Wararka - Bamboo qurxinta daryeelka - talooyinka nadiifinta iyo dayactirka
Baasaboorka sharraxaadda daryeelka – tilmaamidda iyo dayactirka
Bamboo waa nooc adag oo caws ah oo ku habboon samaynta terasalo aad u adag iyo looxyo lagu sharraxo. Dusha sare ee bamboo ayaa ka dhigaya jardiinadaada muuqaal dabiici ah oo qurux badan. Gogosha bamboo culus waxay isticmaashaa waxyaalaha ugu fiican ee bamboo, waxaana lagu sameeyaa tikniyoolajiyad lagu farsameeyo birta. Dabaqa culus ee bamboo waa mid aan sun ahayn, ur lahayn, adag oo deggan, oo u adkaysata cayayaanka. Waa doorashada ugu fiican ee goobaha bannaanka, sida jardiinooyinka, bulshada, fagaaraha, iwm.
Si kastaba ha noqotee, gogosha bamboo ee banaanka ah waxay noqon kartaa wasakh iyo cawl waqti ka dib. Nadiifinta iyo dayactirka saxda ah waa muhiim si loo ilaaliyo sagxadda sida ugu macquulsan.
1. Maxay muhiim u tahay in dayactirka la sameeyo?
Waxaa jira arrimo badan oo saameyn ku yeelan doona looxyada, sida caleemaha, manka, dhaxan, roob ama qorrax badan. Xaaladaha cimilada ee kaladuwan ee meelo kaladuwan waxay leeyihiin saameyn badan oo ku saabsan muuqaalka looxyada bamboo. Xaaladahaas oo kale, looxyada sharraxaaddu way nijaasoobi doonaan, midabkuna way sii yaraanayaan waxaana laga yaabaa inay kala jajabaan iyo dildilaacyo. Markaa aad ayey muhiim u tahay in xoogaa dayactir ah lagu sameeyo si sagxaddaadu u ahaato mid hagaagsan.
2. Sidee loo sameeyaa dayactirka?
Boodhka looxaanta bamboo, sida decking dhirta kulaylaha kulaylaha, waxaa lagama maarmaan ah in lagu sii hayo saliidda biyaha ku jirta (sida saliidda Woca) ugu yaraan hal mar sanadkii. REBO waxay kuu soo jeedineysaa inaad dayactir nadiif ah oo fudud sameyso isla markaaba ka dib rakibida guddiga decking, waayo xoqdo qaar ayaa la sameyn doonaa inta lagu jiro rakibida.
Halkan waxaa ku yaal tilmaamo tixraac ah:
Ugu horreyntii, waa inaad doorataa xoogaa qalab ku habboon nadiifinta looxyada.
1) Nadiifi sabuuradda: ku dhaq biyo ama nadiifiye khaas ah si aad uga takhalusto mucedine-ka iyo wasakhda markaas ku nadiifi burush.
2) Hubso in looxyadu ay si dabiici ah u qalalan yihiin oo ay mari karaan saliida biyaha ku jirta.
3) Ilaali aagga la ilaaliyay ilaa saliidu si dabiici ah u qalasho.
Halkan waxaa ku yaal farqiga u dhexeeya midabka REBO M-taxane ah (mid dhexdhexaad ah) iyo D-taxane ah (qoto dheer leh carbonized)
Dayactirka joogtada ah ee sagxadda alwaaxda culus ee bannaanka ayaa ilaalin kara saameynta guud ee sagxadda dhulka, mana adka in la ilaaliyo. Sidaa darteed haddii aad rabto sagxaddaadu waxay u egtahay qurux sidii hore, dayactirka ayaa aad muhiim u ah. Waa hawl kuu fudud adiga, sax? Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir.